AFG Pilatus PC ကို 12
AFG Pilatus PC ကို 122နှစ်ပေါင်း3months ago #1038
တစ် AFG Pilatus PC ကို 12 ကိုဖန်တီးရန်မည်သည့်အစီအစဉ်များရှိပါသလား FSX/ SE? ကျွန်မအနည်းငယ်တွေ့ရှိရင့်ပေမယ့်သူတို့အပျေါမှာ install လုပ်ရမရှိမဖြစ် FSX/ SE ။
AFG Pilatus PC ကို 122နှစ်ပေါင်း3months ago #1039
သငျသညျမြား၏ဘောငျထုတ်ဝေရှိသည် Do FSX? ဒါမှမဟုတ်ရေနွေးငွေ့လား simivation.com တွင်ဤပုံစံ ရှိ၍ ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည် FSX အဘယ်သူမျှမပြဿနာများနှင့်အတူဒီနေရာမှာ flyaway Simulator ဆီကနေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
တစ်ခါတစ်ရံထိုအ downloads, ပုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအပိုဆောင်းဖိုင်တွဲပေါင်းထည့်မယ်လို့ FSX ဖိုင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မဖတ်ရန်လေယာဉ်ပျံများဖိုလ်ဒါ။ ယင်းကိုရှောင်ရှားရန်လေယာဉ်အမည်တွင်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုသာရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ဖိုလ်ဒါကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းအချက်အလက်များရရှိရန်ဖိုင်တွဲနှစ်ခုကိုဖွင့်ရန်လိုသည်၊ FSX ဖိုင်ကိုဖတ်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကကရှင်းပြသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သငျသညျအစားထဲမှာချပြီးထက်, file ကို download လုပ်ပါပြီးတာနဲ့ FSX လေယာဉ်ဖိုလ်ဒါ .. Desktop ပေါ်မှာဖြည်ချလိုက်ပါ။ ဖိုင်တွဲသုံးခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
flyawaysim ... doc ဖိုင်
အားလုံးပေမယ်သည် PC-12X ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်ပစ်ပါ
အဆိုပါ PC ကို-12X folder ကိုဖွင့်ပါနဲ့အခြား folder ကိုပုံပေါ်: AFGPC12X ။ ဒါဟာသင်သည်သင်၏မှကူးယူချင်ပါလိမ့်မယ်ဖိုင်တွဲဖြစ်ပါတယ် FSX / / လေယာဉ် folder ကို simobjects ။ ညာဘက်ထို့နောက်အတွက်လေယာဉ် folder ထဲမှာအဲဒီဖိုင်တွဲထဲမှာ paste, အ AFGPC12X ဖိုင်တွဲများနှင့်ရွေးချယ်ထားသောမိတ္တူကို click FSX... ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်နေရမည်!
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် DRCW. Reason: Procedure for download of file
AFG Pilatus PC ကို 122နှစ်ပေါင်း3months ago #1040
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ Steam Edition ရှိပါတယ်။ ငါ flyaway နှစ်မျိုးလုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး သင့်အကြံဥာဏ်ကိုငါကြိုးစားမယ် ငါ့ကိုကံကောင်းပါစေ
AFG Pilatus PC ကို 122နှစ်ပေါင်း3months ago #1041
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဒါကငါရှာနေတဲ့ Magic Bullet ပဲ။ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
AFG Pilatus PC ကို 122နှစ်ပေါင်း3months ago #1042